နွေရာသီတွင် ဟာလန်းခေါ်ယူလိုတဲ့ ကလပ်အနေဖြင့် ငွေကြေး ဘယ်လောက် အသုံးပြုရမလဲ? – Play Maker Sports Journal
နွေရာသီတွင် ဟာလန်းခေါ်ယူလိုတဲ့ ကလပ်အနေဖြင့် ငွေကြေး ဘယ်လောက် အသုံးပြုရမလဲ?
ယနေ့မှာ AS သတင်းစာကအာလင်းဟာလန်းကိုခေါ်ယူလိုတဲ့ကလပ်အနေဖြင့်ငွေကြေးဘယ်လောက်ကုန်ကျလာမလဲဆိုတာဖော်ပြလာပါတယ်။
AS ကကလပ်အနေဖြင့်ဟာလန်းကိုခေါ်ယူရန်ပြောင်းရွှေ့ကြေးအနည်းဆုံးယူရိုသန်း၁၀၀ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသွားပါတယ်။ကစားသမားကလုပ်ခတစ်နှစ်ယူရို၂၅သန်းတောင်းဆိုထားတဲ့အပြင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်စုစုပေါင်းယူရိုသန်း၅၀လည်းအလိုရှိနေပါတယ်။
ေႏြရာသီတြင္ ဟာလန္းေခၚယူလိုတဲ့ ကလပ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကး ဘယ္ေလာက္ အသုံးျပဳရမလဲ?
ယေန႔မွာ AS သတင္းစာကအာလင္းဟာလန္းကိုေခၚယူလိုတဲ့ကလပ္အေနျဖင့္ေငြေၾကးဘယ္ေလာက္ကုန္က်လာမလဲဆိုတာေဖာ္ျပလာပါတယ္။
AS ကကလပ္အေနျဖင့္ဟာလန္းကိုေခၚယူရန္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေၾကးအနည္းဆုံးယူ႐ိုသန္း၁၀၀ အသုံးျပဳရမွာျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပသြားပါတယ္။ကစားသမားကလုပ္ခတစ္ႏွစ္ယူ႐ို၂၅သန္းေတာင္းဆိုထားတဲ့အျပင္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္စုစုေပါင္းယူ႐ိုသန္း၅၀လည္းအလိုရွိေနပါတယ္။
ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပစ်ခတ်မှုကြောင့် ခေါင်းကိုထိကာ အာဂျင်တီးနားလူငယ်ကစားသမားသေဆုံး
မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်စူပါစတားအပေါ် ဆက်လက်ယုံကြည်ပေးရန် အန်ဆယ်လော့တီတိုက်တွန်းခံရ